ठूलाे मौका गुमाएका ठूला राजनीतिज्ञ
इतिहासमा मौका सबैले पाउँदैनन् । यो सधैँभरि सबैलाई मिलिरहने कुरा पनि होइन । ठूला मान्छे भनेका ती मान्छे हुन् जसले मौका पाउँदा मानिसहरूको मनमस्तिष्कमा कहिल्यै नमेटिने इतिहासको रचना गर्छन् ।
बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा करिब डेढ वर्ष मात्र काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, यति छोटो अवधिमै उनले बिर्ता उन्मूलन सम्भव बनाए । राजा रजौटा उन्मूलन पनि गरेर देखाए । भूमिसुधार र पूर्वपश्चिम राजमार्ग उनकै परिकल्पना थियो ।
मनमोहन अधिकारीलाई केवल ९ महिना प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने ऐतिहासिक मौका मिलेको थियो । उनले यस बीचमै ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रममार्फत केन्द्रबाट सिधै स्थानीय तहमा स्रोत साधन जाने प्रणालीको स्थापना गरे । इतिहासमा पहिलो पटक वृद्धहरूलाई भत्ताको थालनी गरेर लोककल्याणकारी राज्यको जग हाले ।
नेपाल बदल्ने ज्यादै ठूलो मौका प्रचण्डलाई पनि २०६५ सालमा प्राप्त भएको थियो । उनी त्यतिबेला नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट सत्तामा आएका थिए ।
संसदमा नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू सबै अर्थात् ८० प्रतिशत सांसदको उनलाई समर्थन मिलेको स्थिति थियो । आमूल परिवर्तनका लागि आमनागरिक अति आतुर थिए भने परिवर्तनका बाधकहरू निकै त्रस्त स्थितिमा थिए ।
यो समयमा उनले देशको अर्थ–राजनीतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न थालेको भए त्यसलाई छेक्न सक्ने कुनै तागत मैदानमा थिएन ।
यस्तो गर्न सक्दा उनको दलको लोकप्रियताको साँधसिमाना रहने थिएन । तर उनले त्यो ऐतिहासिक मौका यथास्थितिमा बिलिन भएर देशभर घुम्दै गुमाए ।
देशको मुहार फेर्नका लागि चाहिने काम थाल्दै नथालेर र नचाहिने–नचाहिने काममा हात हालेर तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दैलैमा आइसकेको मुलुकको सर्वाङ्गीण क्रान्तिको स्वर्ण अवसरलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्ने काम गरे ।
मुलुकको चोला फेर्ने त्यत्ति नै ठूलो ऐतिहासिक अवसर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि नमिलेको होइन । उनको साथमा राज्यसंयन्त्रका तीनै तहमा नेपालको इतिहासमै कसैलाई प्राप्त नभएको प्रचण्ड बहुमत छ ।
संघ तहमा झण्डै दुईतिहाइको बहुमत, सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा आफ्नै पार्टीको एकलौटी सरकार, स्थानीय तहमा पनि ७५३ मध्ये ४१० भन्दा ज्यादामा आफ्नै सरकार । यस्तो अनुकूल अवसर त २०१६ सालमा बीपी कोइरालालाई पनि उपलब्ध थिएन ।
परन्तु यस्तो भान हुन्छ, यो ऐतिहासिक अवसरसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले गफै मात्र हानेर अनाहकमा गुमाउन लागेका छन् ।
उनको सरकारका तीनवटा बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ, तर तिनीहरूमा न त कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिको कार्यक्रम छ, न त प्रगतिशील भूमिसुधारको कार्यक्रम, न आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने कुनै अर्थपूर्ण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम ।
नेकपाको चुनावी घोषणापत्रले खाद्यान्नमा दुई वर्षभित्र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ऐलान गरेको थियो । तर, केपी ओलीका प्रिय अर्थमन्त्रीले पहिलो बजेटमै कृषिको बजेट ९० अर्बबाट घटाएर ४० अर्ब पारे । अहिले त त्यो ४० अर्बभन्दा पनि तल छ ।
ओली सरकारले भटाभट आफ्नो चुनावी घोषणाअनुसारका रूपान्तरणकारी काम गर्दै लगेको हुँदो हो त ज्यादै बलियो जनाधारमा उभिएको यो सरकारलाई चुनौती दिने र यसको राजीनामा माग्ने नैतिक साहस र हैसियत सम्भवतः कसैको हुन सक्ने थिएन
शिक्षाक्षेत्रमा संविधानअनुकूल आमूल परिवर्तन ल्याउन शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत उनले सार्वजनिकसम्म नगरी नाफाखोर निजी शैक्षिक माफियाको आग्रहमा रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका छन् ।
अमेरिका र बेलायतजस्तो पुँजीवादको अग्रणी मुलुकमा समेत नभएको नाफाखोर निजीमुखी विद्यालय शिक्षानीति अपनाउन उनी समाजवादउन्मुख नेपालमा लागिपरेका रहेछन् । संवैधानिक तवरले देश संघीय छ तर सरकारको बजेट र सारा काम कारबाहीहरू अधिकार र स्रोतसाधनको अत्यधिक केन्द्रीकरणमा आधारित देखिन्छन् ।
आजै कमाएर आजै खानुपर्ने लाखौँ श्रमिकहरूको कोरोनाको महामारीको समयमा देशभरि देखिएको बिल्लीबाठ, भोकभोकै कैयन् दिन लगाएर भएको ती श्रमिकको रैथाने गाउँको यात्रा, कैयनको भोकले मृत्यु तथा चितवनको माडीमा हालै मात्र चेपाङको झुपडीमा लगाइएको आगोको खरानीले उदाङ्गो पारेकोे छ– समाजवादउन्मुख ओली सरकार अब यथार्थमा कुन वर्गको पक्षमा उभिन पुगेको छ । -
यती होल्डिङ्स काण्ड भनौँ या ओम्नी कोरोना स्वास्थ्य–सामग्री खरिद काण्ड, भूपू संचारमन्त्री काण्ड भनौँ या स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री वा रक्षामन्त्री संलग्नता काण्ड, भ्रष्टाचारमा त यो सरकारले यसअघिका हरेक सरकारलाई निकै पछि छोडी सकेको देखिन्छ ।
यो सरकारले चीनसितको पारवहन मार्ग खोलेर र नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेर राष्ट्रियताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम नगरेको होइन । तर, त्यो कामलाई उनका अन्य कुकामहरूको कालोले यसरी छोप्यो कि त्यो लेउले छोपिएको सग्लो अक्षर जस्तो भयो ।
ओली सरकारले भटाभट आफ्नो चुनावी घोषणाअनुसारका रूपान्तरणकारी काम गर्दै लगेको हुँदो हो त ज्यादै बलियो जनाधारमा उभिएको यो सरकारलाई चुनौती दिने र यसको राजीनामा माग्ने नैतिक साहस र हैसियत सम्भवतः कसैको हुन सक्ने थिएन ।
परन्तु शासनको अढाइ वर्ष बित्दा पनि नियमित औसत कामबाहेक अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक÷सांस्कृतिक क्षेत्रमा, सेना–प्रहरी–प्रशासन–न्यायालयको जनमुखी रूपान्तरणको क्षेत्रमा भावी पुर्खाले सम्झन लायकको कुनै एउटा क्रान्तिकारी काम पनि ओली सरकारले गर्न सकेको वा गर्न खोजेको देखिँदैन ।
यथार्थमा अहिले डब्बल नेकपाभित्रको सत्ता संघर्षको गाईजात्रा ओली सरकारको गफास्टक अकर्मण्यताले पैदा गरेको परिणाम सिवाय केही होइन । अहिले जुन संकट उनले भोगिरहेका छन्, त्योे स्वसिर्जित संकट हो, मूलतः वाचाअनुसार काम नगरेर, कहिले कोरोनाको चरम महामारीमा बेला न कुबेला पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर, कहिले सिंगो राष्ट्र उनको वरिपरि एक ढिका भइरहेको बेला उनका आफ्नै दलका नेताहरूले भारतसित मिलेर उनलाई पदच्यूत गर्न लागे भन्ने बेतुकको आरोप लगाएर ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई देश बदलेर देखाउने जुन ज्यादै ठूलो अवसर आएको थियो, त्यो बहुमूल्य अवसर उनले अनाहकमा गुमाएका छन् । राज्यसत्ताको वर्गस्वरूप बदल्ने कुनै रूपान्तरणकारी काम नगरेर, गँजडीको गफ मात्र ज्यादा हाँकेर, आफ्नै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र समेत भुसुक्क बिर्सेर यो काममा उनी लागिपरेका छन् ।
त्यो मौका गुमाएपछि अबका जति बाँकी दिन उनी बलपूर्वक, छलपूर्वक सरकारमा रहन्छन्, त्यो हिजोको निर्वाचनबाट हासिल भएको अत्यधिक लोकप्रिय बहुमतसहितको सरकार हुने छैन ।
त्यो यथार्थमा नेकपाको सरकार पनि हुने छैन । किनभने यतिखेर न त नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको बहुमत बाँकी देखिन्छ, न संसदीय दलमा नै । त्यो स्थितिमा ओली सरकार औपचारिक सरकारमा मात्र बदलिएको छ । जोसित सरकार त छ, तर सत्ता छैन । जोसित निर्णय गर्ने हक त छ तर त्यसलाई लागू गराउन सक्ने नैतिक हुती छैन ।
यति ठूलो अवसर पाएर पनि ओली सरकारले तात्त्विक महत्त्वको कुनै रूपान्तरणकारी काम गर्न नसकेपछि नेपालका वामपन्थीको थाप्लाेमा हम्मेसी नमेटिने एउटा दाग लाग्न पुगेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ भाष्य स्थापित भएको छ– नेपालका वामपन्थीहरू सत्ताबाहिर रहँदा निकै क्रान्तिकारी कुरा गर्छन् । जब उनीहरू सत्तामा पुग्छन् र देश बदल्ने अवसर उनीहरूको हातमा आउँछ, तब उनीहरू आफ्नो क्रान्तिकारी सिद्धान्त, विचार र वाचाको वस्त्र सिंहदरबारको ढोकाबाहिरै छोड्छन् । सत्तामा जाँदा क्रान्तिकारी प्रचण्ड सिंहदबारको ढोकाबाहिरबाटै अलप हुन्छ, भित्र जान्छ त केवल पुष्पकमल दाहाल मात्र । १४ वर्ष जेल बसेर क्रान्तिको रापमा खारिएको ओली सत्तामा जाँदा नेल्सन मण्डेला भएर निस्कँदैन, डोनाल्ड ट्रम्पको नेपाली अवतार भएर निस्कन्छ ।
ठूलो मौका आउँदा ठूला पात्रहरूले गुमाएको ठूलै अवसरका कारणले अब निकै लामो समयसम्म नेपालको वामपन्थले यति ठूलो बहुमत फेरि ल्याउन ज्यादै मुस्किल हुनेछ ।
वामपन्थीलाई यति ठूलो बहुमत प्राप्त हुँदा पनि काम गरेर देखाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो साख त समाप्त पारेकै छन्, अन्य सबै वामपन्थीको भविष्य पनि अन्धकारमा परेको छ ।
अब पालो नयाँ पुस्ताको
एक दशककै अवधिमा दुई ठूला पात्रहरूले उथलपुथलकारी काम गरेर देखाउने दुई ऐतिहासिक अवसर गुमाएपछि अब सरकारको बागडोर फेरि पहिलो पुस्तामै साटफेर गर्ने कुराले नेपालको राजनीतिमा कुनै तात्त्विक प्रगतिशील परिवर्तन नआउने कुरा दिउँसोको घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
सबै पार्टीका पहिलो पुस्ताका अगुवाहरू पटक–पटक परीक्षित तर असफल सिद्ध नेताका रूपमा स्थापित छन् । देशमा परिवर्तन गर्नु छ भने अब सत्ता नयाँ पुस्तामा स्थानान्तरित हुनु आवश्यक छ ।
नयाँ पुस्ताका पनि दृष्टि खुलेका, अवसर आउँदा राम्रो काम थालेर देखाएका, असल चरित्रका, गरिखाने वर्गका नेतामा अब देशको वामपन्थको भविष्य आधारित छ ।
पुराना पुस्ताका असफल नेताहरूले सजिलै र खुशीराजीसँग वर्षौँदेखि हत्याई आएको कुर्सी छाड्लान् भनेर अपेक्षा गर्नु टेलिफोनको लट्ठामुनि तरूल फल्ला भनेर आशा गर्नुजस्तै हुनेछ ।
उनीहरूलाई योजनावद्ध रूपमा र बलपूर्वक बिदाइ गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि नयाँ पुस्ताको अग्रसरता आवश्यक छ ।
यतिबेला निकै राम्रो के भएको छ भने पहिलो पुस्ताका शीर्ष अगुवामध्ये कसैप्रति पनि आज आमजनताको भ्रम र आस बाँकी छैन । त्यसमाथि थप, डब्बल नेकपामा नयाँ पुस्ताले केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्ने पहल गरेका छन् ।
दुवैलाई आआफ्नो पद छाडेर नयाँ पुस्तामा सत्ता हस्तान्तरण गर्न राजी गराइयो भने सरकारको बाँकी अवधि पनि राम्रोसित चल्नेछ । र, पार्टीको संचालन पनि सुव्यवस्थित ढंगले हुनेछ । नेकपा पनि फुटको दुर्घटनाबाट बच्नेछ
यो महाधिवेशनपछाडिको सबैभन्दा शक्तिशाली वैधानिक अंग हो । यो अंगले प्रणालीगत रूपमै सत्ता नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरणको निर्णय गर्न सक्छ ।
अतः यो अंगमार्फत नयाँ पुस्ताले क्रमवद्ध रूपमा असफल तथा असक्षम पहिलो पुस्तालाई बिदाइ गर्ने साहस देखाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले सुस्पस्ष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ कि– न त केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा बसेर त्यो पदमाथि न्याय गर्न सकेका छन्, न अध्यक्ष पदमा बसेर प्रचण्डले । अब उप्रान्त एक व्यक्तिमा एक पद मात्र रहनुपर्छ । सबै सक्षम व्यक्तिमा जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरण गरिनुपर्छ ।
यसरी दुवैलाई आआफ्नो पद छाडेर नयाँ पुस्तामा सत्ता हस्तान्तरण गर्न राजी गराइयो भने सरकारको बाँकी अवधि पनि राम्रोसित चल्नेछ । र, पार्टीको संचालन पनि सुव्यवस्थित ढंगले हुनेछ । नेकपा पनि फुटको दुर्घटनाबाट बच्नेछ ।
अहिले कोरोना भाइरसको यत्रो विश्वव्यापी महामारी, बाढीपहिरोको यति ठूलो जनव्यापी हाहाकार र भारतको बलमिच्याइँको समयमा कुर्सीको लडाइँ गरिरहने पार्टीका अगुवाहरू त्यो कुर्सीका लागि विल्कुलै योग्य छैनन् ।
सम्मानजनक अवकाश नै वृद्ध असक्षम नेताहरूका लागि एक मात्र पुरस्कार हो । ६५ वर्ष काटेका हरेक नेताको स्वतः अवकाश हुने प्रणालीको थालनी अब डब्बल नेकपाबाटै थाल्ने हो कि ? सबै पेसामा ६० वर्ष पुगेपछि अवकाश प्राप्त गर्ने प्रणाली हुने, राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र त्यो किन नहुने ? किन ब्रह्मनालमा पुग्दासम्म पनि राजनीतिक नेताले पद ओगटेर बस्नुपर्ने ?
यस्तो अवकाशको प्रबन्ध गर्न सकियो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आगमनका लागि एउटा गतिलो कुराको थालनी हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १६, २०७७, २१:२८:००